Ho voavahan’ny minisitry ny tontolo iainana vaovao ao Dominika ve ireo haika navelan’ny rivodoza Maria? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2018 4:46 GMT
Morontsiraka atsinanana lonaka ao Dominika tamin'ny volana mey 2006, izany hoe talohan'ny fandravana nataon'ny rivodoza (Hurricane) Maria tamin'ny Septambra 2017. Sary avy amin'i janinephoto, nahazoana alalana.
Ao anatin'ny ezaka fananganana indray taorian'ny fandravaravan'ny rivodoza (Hurricane) Maria ny firenena tamin'ny Septambra 2017, dia nanendry minisitra vaovao hisahana ny tontolo iainana, fizakàna ny toetrandro, fitantanana ny voina ary ny fanavaozana ny tanandehibe ny nosy karaiban'i Dominika.
Raha nametraka tanjona maromaro hanorenana indray ny firenena i Joseph Isaac, hanamaivanana ny manjo ireo niharam-boina ary hiomanana tsara kokoa amin'ny vanim-potoanan'ny rivo-doza manaraka, mbola maro ny ao amin'ilay nosy no sahirana miatrika ny fiantraikan'i Maria mbola mitarazoka sy ny ahiahiny amin'ny tsy fahampian'ny fampahalalàna sy fampahafantarana momba ireo servisy fanampiana sy fanohanana.
Nanao ny fianianany amin'ny fandraisany ny fahefana i Isaac tamin'ny 13 aprily 2018, nanao ny hetsika mampiady hevitra niala tamin'ny tsy fivadihana amin'ny Antokon'ny Mpiasa Mivondrona (UWP), antoko mpanohitra nisy azy, ary nanao lohalisitra mahaleotena ambanin'ny antokon'ny fitondrana ao Dominika ny Antokon'ny Asa ao Dominika.
Rehefa nanambara ny fialany tamin'ny UWP i Isaac, dia nanazava izy fa i Dominika no laharam-pahamehana ary ambin-javatra avokoa ny zavatra hafa. Eo amin'ny toerany vaovao amin'ny maha-mpikambana mahaleotena azy ao amin'ny parlemanta, dia nanoritra tanjona maro ho an'ny firenena i Isaac.
Araka ny fanambarana an-gazety iray ao amin'ny tranokalan'ny Biraon'ny Praiministra, manantena hiresaka ny “lohahevi-dehibe azo atolotra avy hatrany” hatramin'ny fiandohan'ny 1 jona 2018 i Isaac sy ny ekipany. Anisan'izany ny fijerena ny toetran'ny fialofana ankehitriny ao amin'ny firenena, fandrisihana ny sehatra tsy miankina, fanomezan-kasina indray ny ala sy ny maro hafa.
Hiasa amin'ny fandrosoana ny fanaovan-dalàna nataon'ny Sampam-panatanterahana ny fahazakana toetrandro ho an'i Dominica (CREAD) natomboka tamin'ny volana lasa i Isaac. Miezaka koa izy hijinja sy hampiasa ireo hazo nidaboka hatao trano sy fanaka, manamafy fa iankinan'ny aindehibe ny fampialofana (fanomezana trano) — indrindra fa efa antomotra ny vanim-potoanan'ny rivodoza. Fanampin'izany, hamaha ny olan'ny fahadiovana sy ny fanariana fako ao an-drenivohitra ao Roseau ny minisitra vaovao.
Niteny toy izao i Isaac nandritra ny lanonana nanaovana fianianana:
Ny ifantohantsika voalohany aloha dia ny fialofana, niresaka momba ny afovoan-tanànan'i Roseau aho, trano ao an-tanàna sy manerana ny firenena ihany koa hiantohana fa afa-manatratra ny tanjona fahazakàna isika sy hiantohana fa voaaro amin'ny zavatra maro ny vahoaka.
Naneho hevitra i Ella Mitchel:
Mahafinaritra. Tsy maintsy manala ireo (zezika) shimika ampiasain'ny tantsaha eny an-tanimboly ihany koa isika. Lonaka ny tanintsika mba hahatonga antsika ho FIRENENA MAMPIASA ZEZIKA MIKAJY NY TONTOLO IAINANA. Nanadio antsika i MARIA, avelao hizotra ho amin'izany.
Tsy ela izay ny Foibe Nasionaly misahana ny Rivodoza (Hurricane) namoaka Tatitra momba ny rivodoza thropikaly izay nanamarika fa ,iteraka fahafatesan'olona miisa 31 ny fandalovan'ny rivodoza Maria tao amin'ny nosy. Olona 34 no mbolananjavona. Farafahakeliny ihany koa ny fahasimbana nateraky ny rivodoza tao Dominika dia mitentina 1,31 miliara dôlara amerikana:
Ny sehatry ny fambolena no tena potika. Lasa korontan-tsaha midadasika sisa ilay nosy thropikaly nandrobona be taloha. Tao amin'ny tsanganana Facebook iray vao avy namely indrindra ny rivodoza, nofariparitan'ny praiminisitr'i Dominika, Roosevelt Skerrit, ho mahazendana loatra ny faharavàna. Na nahasimbana na niendaka ny tafon'ny ankamaroan'ny trano sy ny fanorenana. Nisy fahasimbana betsaka tamin'ny lalana. Tapaka ny herinjiro, ny tolotra finday sy aterineto, ka mahatonga ny firenena ho tsy afa-nifandray tamin'ny tontolo any ivelany.
Nahazo fanohanana ara-bola sy mpirotsaka an-tsitrapo i Dominika taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Maria. Nampanantena tamin'ity firenena nosy ity ny Banky Mondialy vao haingana fa hanome fanampiana 17 tapitrisa dolara amerikana hananganana toby mpamelona angovon'aratra avy amin'ny hafanan-kibontany. Nankatoa ihany koa ry zareo hanome 65 tapitrisa dolara amerikana hamerenana amin'ny laoniny ny fambolena, ny fialofana ary hafa:
Hanampy ny tantsaha sy ny mpanjono hamerenana amin'ny laoniny ny rafitra sy ny voka-pambolena sy ny famokaran-trondro, ary hampiasa ny fomba sahaza ny toetrandro ny tetikasa vonjiaina amin'ny famelomana ny fambolena sy mahazaka toetrandro (25 tapitrisa dolara amerikana). Ny tetikasa fanarenana trano fonenana (40 tapitrisa dolara amerikana) dia hifantoka amin'ny fanorenana indray ny trano ary hanatsarana ny fampiharana ny fomba fananganana trano mahazaka toetrandro. Ahitana fanohanana ara-bola 50 tapitrisa dolara ny tetikasa famatsiam-bola 65 tapitrisa dolara amin'ireo tetikasa roa ireo.
Ny ezaka dia nampifantohana tamin'ny fananganana indray ireo fotodrafitrasa ho afa-mijoro kokoa amin'ireo tafiotra hoavy.
Namoaka ny tantaran'ny vehivavy iray nahazo fanomezana trano avy amin'ny governemanta ny praiminisitra Roosevelt Skerrit. Araka ny lahatsoratra, namoy ny reniny, ny anadahiny, ny rahavaviny roa ary ny zana-drahavaviny nandritra ny fandalovan'ny rivodoza Maria io vehivavy io. Nidera ny praiminisitra ny mpisera ary nanaiky fa nandona fo ilay tantara, ary maro no nanolo-kevitra fa ny dingana manaraka dia ny ahafahan'ilay vehivavy mianto-tena ara-bola.
Nanamarika i Elsa Royer, mpisera Facebook:
Maro ny tantara tahaka io iray io, tena mampalahelo. Faly aho fa nahazo trano fonenana avy amin'ny governemanta izy. Ny tanjona anefa dia ny mba hiantohana fa nomena fonenana izy mba tsy hiankinany amin'ny fikarakaran'ny governemanta azy. Tokony ho lalana ahafahany mizaka tena izany.
Lasa ny fanontaniana hoe alefa aiza ny vatsy fanampiana vokatry ny rivodoza
Na dia teo aza ireo tantaram-pahombiazana, dia naneho ny ahiahiny amin'ny fandrosoan'i Dominika ny mpisera media sosialy hatramin'ny nandonan'ny rivodoza azy. Ho setrin'ny lahatsoratra miresaka ny vatsy omen'ny Banky Mondialy tao amin'ny Vaovao Antseraseran'i Dominika, dia naneho ny ahiahiny momba ny toerana sy ny fomba andefasana ny vatsy vonjy aina any amin'ny toerana nisian'ny voina tokoa i Ibo France, mpaneho hevitra:
Nahazo fanampiana vola sy hatsaram-panahy be dia be avy amin'ireo firenena, fifandaminana ary andrin-drafitra mpanome i Dominika. Tena tsara izany. Manao fandehan-tsokatra (na sifotra) ny fanatontosana ny drafitra mahazaka toetrandro. Na izany aza, maro loatra ny tafon'ny trano sy tranom-panjakana, lalana, tetezana, lalamby ary lalana potika. Amin'ny fanorenana trano, tranobe sy làlana, ny famerenana indray ny sehatry ny fambolena sy ny jono, ny fipongaran'ny fihariana vaovao sy tsaratsara kokoa, dia tokony hirehitra mivaivay ny toekarena. Nefa nampiasaina hanatsaran-toerana amin'ny fifidianana ny fanomezana.
Na dia tsy voaporofon'ny hita ampahibemaso aza ny fiampangan'ny mpaneho hevitra amin'ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny vatsy fanampiana, na tsy misy aza ny olo-malaza na fikambanana nanao fiampangana toy izany, maro ny Dominikana nilaza fa tsy ampy ny fanampiana na ny torhay nomena azy ireo. Nanao fitsapan-kevitra tamin'ny Dominikana miisa 400 ny Ground Truth Solutions, Fifandaminana iraisampirenena iray tsy miankina amin'ny governemanta mifantoka amin'ny tamberin'andraikitra aorian'ny voina, taorian'ny fandonan'ny rivodoza Maria. Tao amin'ny andiany fahaefatra amin'ny fitsapan-kevitra hatramin'ny nisian'ny voina voajanahary, 95 isanjato amin'ireo namany izay nanana trano rava tanteraka no nilaza fa tsy voavaly araka ny tokony ho izy ny filàn-dry zareo hahazoana “fanohanana ara-bola na ara-pitaovana hananganana trano sy lalam-pihariana”.
Ny fanohanana ara-bola no tena zava-dehibe ho an'ireo 69 isanjato tamin'ny namaly, raha nisy 43 isanjato no nahita fa ny trano fonenana vaovao no tena iankinan'ny ain-dehibeny. Ny nanaitra dia ny nahitana fa ny 77 isanjato tamin'ireo namaly dia tsy nahalala akory ny fomba fanaovana fitarainana araka ny tokony ho izy.
Raha nanontaniana ry zareo raha efa tsara omana amin'ny fanatrehana voina voajanahary hafa, dia namaly ny 44 isanjato fa “tena tsia avy hatrany”, 23 isanjato nilaza “fa tsy vonona loatra,” 18 isanjato namaly fa “eny amin'ny ankapobeny,” ary 2 isanjato ihany no namaly hoe “vonona tanteraka.”
Nanao fehin-kevitra tahaka izao ny fitsapan-kevitry ny Ground Truth Solutions:
Ny hafatra mangarahara indrindra avy amin'ny fitsapan-kevitra dia ny filàna maika dia maika manangana fampahafantarana sy fanoloran-tena — fa tsy fanontaniana fotsiny — ireo vondrom-piarahamonina voakasika. Amin'izao fotoana izao dia maro loatra ny olona tsy ampy torohay amin'izay azon-dry zareo antenaina amin'ny programa famerenana amin'ny laoniny sy ny hoe rahoviana ny ‘building back better’ [teny tigetra voavolavola taorian'ny voina voajanahary, mamerina manangana tsara kokoa] no hanomboka hampisy fahasamihafana amin'ny fiainan-dry zareo.
5 andro izaySt. Vincent & the Grenadines